Ukufika kukaJulia-Ulwandle lokujonga ikhaya eDildo Harbour
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLee
Wamkelekile kwikhaya lethu lemveli, iinkwenkwezi ezi-4, ikhaya leholide elwandle, elikwidolophu entle yaseNewfoundland yaseDildo, phantse iyure enye ukusuka eSt. Idume ngegama layo, iDildo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola iTrinity Bay kunye neendawo ezingqongileyo.
Le ndlu inezinto ezininzi eziphuculweyo kodwa isazigcina isimilo kunye nomtsalane. IDildo Craft Brewery & Museum, iDory Grill, iivenkile zezipho kunye nebala elikhulu lokudlala zihamba kancinci kakhulu. I-Anderson's cove yimizuzu eli-10 kuphela yokuhamba ukusuka endlwini.
Ikhaya lethu lineminyaka engaphezu kwe-100 likho yaye likwilali entle
Idolophu yaseNewfoundland. Indlu inikwe ngokucingelwayo ngeziqwenga ezikhethekileyo ukwenza amava akwi-port ayinyani kunye nokulula okuphezulu. Uyakonwabela iimbono ezintle zolwandle ukusuka kwindawo enkulu kunye namanqanaba amaninzi angaphambili. Kananjalo, ikhitshi ihlaziywe ngokupheleleyo ukuze ihlangabezane neemfuno zakho.
Kwabo bafuna ukwenza umsebenzi othile, kukho umngxunya/iofisi enikwe idesika, isitulo kunye nomshicileli kumgangatho omkhulu.
I-Dildo yindawo entle yoluntu kwi-Avalon Penninsula. Phonononga indawo yabalobi, iDildo Brewery & Museum, ukhenketho lwangaphandle kunye nokunye. Ivenkile yokutya kunye nekhemesti ekufutshane. Kukho i-spa ngaphakathi komgama omfutshane wokuqhuba. Anderson Cove ngaphakathi 10 imizuzu yokuhamba.
Sinokufikelelwa nge-imeyile, okubhaliweyo okanye ukusetwa komyalezo kwindawo ye-Air B n B kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dildo